အိုး ပါပြောင် အောင် ဆေးတဲ့ သူ – Hlataw.com
ည ၁၁ နာရီကျော်နေပြီ….. အိပ်ယာ ထဲမှာ ဘယ်ညာ လူးလိမ့် ရင်း အိပ်လို့မရနိုင် ဖြစ်နေသည်….. လက်တဖက်မှ ယောင်ယမ်း ကာ ရင်နှစ်မွှာကို ပွတ်သပ်နေမိသည်… သက်ပြင်းမော များချကာ ကြိတ်မှိတ်၍ ခံစားနေရသည်…. လျော့တိလျော့ရဲ ထမီအောက်မှ ဖားပေါင်စင်းတစ်ကောင် လှုပ်စိလှုပ်စိနဲ့ ပေါင်နဲ့ ပွတ်မိနေပြန်သည်…. ငိုချင်စိတ်တောင် ပေါက်လာမိသည်… ဒီခံစားချက်ရဲ့ အထွဋ်ထိပ်ကို သူမခံစားဖူးသည်.. ယ္ခုတစ်ယောက်ထဲ စိတ်ကျေနပ်ဖို့ ဆိုတာ ရာနှုန်းပြည့်မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာသိ၍ ခံစားနေရ၏.။
သူ့နာမည်က မသန္တာချိုနွယ်……. သူမရဲ့ချစ်လှစွာသောအမျိုးသားမှာ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှ လက်ထပ်ပြီး တစ်ပတ်ကျော်မှာပဲ အမှတ်တမဲ့ ဆုံးပါးသွားခဲ့သည်… ဆေးစစ်ချက်တွေအရ အသည်းတစ်ခြမ်းကြီးနေလို့ ဟု ဆိုသည်……. အခုမှ အိမ်ထောင်ကျခါစ ., ကာမသွေးတွေ ဆူနေတုန်း …. ယွစိယွစိနဲ့ ပိုးလေးတွေကို ဆွပေးခဲ့သလိုပဲ.. သူအတွက်တော့ ညအိပ်ယာဝင်တိုင်း ကန်သူမဲ့ နေတဲ့ ဘောလုံးကွင်းကြီးလိုပဲ…ကိုရယ် ကိုသာရှိရင် ကို သွင်းချင်သလောက် သွင်းပစ်လိုက် ဂိုးတွေအများကြီး အသွင်းခံမယ် မ ပါ…အဟင့်…အဟင့် ”’ အသံမျှင်းမျှင်း လေးညည်းရင်း ပွတ်ချေကာ တုန်လှုပ်သွားလိုက်သည်.. ဒီနောက် မှာတော့ သူမအိပ်ပျော်သွားခဲ့သည်..,..
ဦးနေလင်း ဆိုတာက ရပ်ကွက်မှာ ပရဟိတ အကျိုးသယ်ပိုးဆောင်ရွက်နေတဲ့ လူသိများသူတစ်ဦး ….ရပ်ကွက်ထဲက ယောက်ကျားမိန်းမအားလုံးနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ပေါင်းတတ်သူ….. မသန္တာချို အိမ်နား ရောက်ခါမှ အမှတ်တမဲ့ မိုးက ဗြုန်းခနဲ ရွာချလိုက်သည်.။ ‘ဟေ့ မချို ရေ ငါ ခဏ မိုး ခိုဦးမယ်ဟေ့.. အိမ်ရှေ့ ခန်းထဲဝင်ပြီး လှမ်းအော်လိုက်၏.,ပြီးမှ ဦးနေလင်းတစ်ခုစဉ်းစားမိ၏… ဒါ သင့်တော်ပါ့မလား.. မချိုက မုဆိုးမ ပူပူနွေးနွေး… ငါက တစ်ခုလပ်.. တော်ကြာ ရပ်ကွက်ထဲကလူတွေ မြင်သွားရင် တစ်မျိုးမြင်ပြီး ငါ့ကို အထင်အမြင် သေးကြလိမ့်မယ်., မိုးမြန်မြန်တိတ်မှ ဖြစ်မယ်.. မချို လည်း ထွက်လာပါ့လား.. အိမ်တံခါးဖွင့်ပြီး အပြင်တော့ မသွားလောက်ပါဘူး.. လှမ်းခေါ်ကြည့်ဦးမှ … ထီးရှိရင် ငှါးပြီးပြန်မှ ဖြစ်မယ်…
မချိုရေ ..မချို.. မိုးသံနဲ့ မကြားဘူးထင်တယ်… မထူးပါဘူး နောက်ခန်းထဲမှာ သွားကြည့်လိုက်ပါမယ်…..ဟာ ဟာ ….မချို ရုတ်တရက် ဦးနေလင်း သွေးသားများဗြန်းကနဲ ဆူပွက်သွား၏…အသိစိတ် တို့ အဝေးထွက်ပြေးသွားလိုက်သည်.. မိုးနဲ့အတူ မှောင်မဲနေတဲ့ ရာဂသွေးများလည်း မဆဲပဲ.. တဖွဲဖွဲမှ သဲသဲမဲမဲ ရွာချလာချင်ခဲ့သည်…. သူမြင်နေရတာက မိုးသည်းသည်း ပတ်ဝန်းကျင် လူသူအားလုံး ကင်းမဲ့ပြီး ကာမသွေးတို့ အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာ ပေါက်ကွဲလို့ကောင်းတဲ့ စိတ်ကွယ်ရာ တစ်ခု… ဖြူဖွေးနေတဲ့ တင်လုံး နှစ်လုံးက လှုပ်စိလှုပ်စိနဲ့ လှုပ်ယမ်းနေပြီး ရင်နှစ်မွှာမှာလည်း လှုပ်ခါနေ၏…
ဖက်လုံးပေါ်မှာ စောင့်ကြောင့်ထိုင်ကာ မျက်စိနှစ်ဖက်ကို မှိတ်ပြီး ငိုမဲ့မဲ့ မျက်နာထားနဲ့ အားမလို အားမရ ရှေ့တိုး နောက်ဆုတ် လုပ်နေ၏… တစ်ခါတစ်လေ လက်နှစ်ဖက်မှလည်း ရင်အုံကို ပွတ်ခြေနေ၏… သူမ အားမရနိုင် ဖြစ်လာတယ် ထင်သည်.. အဆက်မပြတ် တရစပ် မြန်မြန် စောင့်လာတော့သည်….. ဗိုက်သား ချပ်ချပ်ရပ်ရပ် နို့အုံမှာ လုံးကျစ်ပြီး နို့သီးခေါင်းလေးများ တင်းပြီး ဆူထွက်နေ၏… လုံးကျစ်ပြီး ကားအယ်နေသော တင်လုံးကြီး နှစ်လုံးဟာ ဖွေးစွတ်နေ၏,…. မစားရတာ ကြာပြီဖြစ်နေတဲ့ ဦးနေလင်းတစ်ယောက် အသိစိတ်တို့ ပြောက်သွားခဲ့ရပြီ…မသန္တာချိုနွယ်ရှိရာသို့ ဦးတည် လျှောက်လှမ်းနေမိတော့သည်…,.။
ဟင်…အား..မရှက်ပါနဲ့ မချိုရယ် …ငါတို့နှစ်ယောက်က ဘဝတူတွေပါ …ငါလည်း အများအမြင်မှာ ကြည့်ကောင်းအောင် နေနေရပေမဲ့ မင်းလိုပဲ တစ်ယောက်ထဲ ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ ခက်ခက်ခဲခဲ ဖြေရှင်းနေရတာပါ.. ခုလို အမှတ်တမဲ့ တွေ့လိုက်တော့ ငါ့သွေးသားဆန္ဒတွေ ဆည်ဘောင် ကြိုးသလိုခံစားရတယ် … ခု ငါလည်း ရွှဲနေပြီ ဆန္ဒရဲ့ အစိတ်ပိုင်းတစ်ချို့ ပဲ့ထွက်လာတာ ဒီမှာ ကြည့်လိုက်ပါ … မချို နင့်ရဲ့ လိုအပ်ချက် ငါ့ရဲ့ ရှေ့ဆက်ချင်နေတဲ့ ဆန္ဒရဲ့သားကောင်… ကြည့်ပါ.. သူ့ခမြာ မင်းလုပ်နေတာတွေ မြင်ပြီး တဆတ်ဆတ် တုန်ခါနေအောင်ကို ခံစားနေချင်နေတာ… ဦးနေလင်းရဲ့ ပေါင်ခြံကြားက အကြောပြိုင်းပြိုင်းထနေတဲ့ လိင်တံကို တရှိုက်မက်မက်ကြည့်နေရင်း မချို၏ ကာမ စိတ်ဆန္ဒများသည် ခုရွာနေတဲ့ မိုးတွေထက် သည်းမည်းစွာ ရွာသွန်းကာ … ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ ဖြစ်လာပါတော့သည်…,
ဒါကို အလိုက်သိသူ ဦးနေလင်းက ကုတင်ပေါ်သို့ တက်လိုက်၏,.. မချိုမျက်နာကို စိမ်းစိမ်းကြီး စိုက်ကြည့်ပြီး အသာအယာ တွန်းလှဲလိုက်ပြန်သည်… မချို ပက်လက်အနေထား လဲသွား၏… ပေါင်နှစ်ဖက်ကို အသာအယာ ဆွဲဖြဲလိုက်ပြီး တရိုက်မက်မက် စိုက်ကြည့်နေ၏ …မို့မောက် ဖောင်းကားအစ်နေ၏… အနားတစ်ဝိုက် အညိုရောင်သန်းနေပြီး အစေ့ထိပ်မှာ ထောင်နေ၏..သူ့စိတ်ကူးနဲ့ အမြဲတမ်း ရင်ခုံနေသောအရာမို့ နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ တွေ့နေရသောအခါ စိတ်မထိန်းနိုင်စွာနဲ ပေါင်ခွကြား ခေါင်းငုံ့ပြီး လျှာထိပ်ဖျားနဲ့ ကလော်ပြီး ထိုးဆွနေမိသည်….
မချိုမှာတော့ အသည်းခိုက်အောင် ကောင်းသောကြောင့်ငိုသံများတောင် ပါနေမိသည်.. ညည်းငြူနေ၏… မိနစ်အနည်းငယ်ကြာသောအခါ ပေါင်လုံး နှစ်ဖက်ကြားကို ဦးနေလင်း ခေါင်း လွင့်ထွက်သွားမှာ ကြောက်သည့်အလား ဇွတ်ဆွဲသွှင်းကာ ဖင်လုံးကြီးများ ကြွမြှောက်တက်လာပြီး လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ခေါင်းကို အတင်းနိပ်ကိုင်ကာ တဇတ်ဇတ် တုံတုံပြီး အသံကုန်ဟစ်အော် သွားတော့သည်…
ထိုအချိန်ထိ ဦးနေလင်းရဲ့ လျှာဖျားကလည်း အရှိန်ပြင်းစွာဖြင့် အစေ့ထိပ်ကို ပတ်မွှေနေတော့၏., မြှောက်တက်လာသော ဖင်နှစ်လုံးမှာ ဗုန်းခနဲကြကာ ကော့ကော့၍ ဆတ်ဆတ်နဲ့ အရှိန်မသေနိုင်သေး ဘယ်လောက်ကောင်းသွားသလဲ.. ခံစားဖူးသူမှသာ သိနိုင်လောက်မည်… ဦးနေလင်းလည်း မနေနိုင်တော့ပါ.. သူမ ပစ္စည်းမှ အရည်ရွှဲများ ပါးစပ်မှ သုတ်ကာ သူမ အပေါ် ကားယားခွ လိုက်၏… တစ်ခါပြီးထားတဲ့သူမ အပေါက်ထဲကို လျှောလျှောရှုရှုပဲ ဦးနေလင်း ပစ္စည်းက ဝင်သွားခဲ့သည်.. မချိုမျက်နာကို ကြည့်ပြီး ကာမအရှိန်တို့ အင်အားကြီးမားလာ၏…
နို့နှစ်လုံးကို လက်ကလည်းကိုင်.. ပါးစပ်ကလည်း စုပ်ပြီး အရှိန်ပြင်းစွာ တရစပ် ဆောင့်နေ၏.. မချိုမှာလည်း ဒုတိယ အချီပြီးဖို့ရန် နီးလာနေပြီ… ဦးနေလင်းရဲ့ပစ္စည်း စံချိန်မှီနေမှု.. ဆောင့်ချက်တွေက တရစပ်ဖြစ်တာကြောင့် အစေ့နဲ့ပွတ်တိုက် ဆွဲအားကောင်းမှု့ ဆာလောင်နေခဲ့တာ ကြာနေခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့် အရမ်းကောင်းနေကြ၏… မချိုရဲ့ ဖင်လုံးကြီးများ အိပ်ယာခင်းနဲ့မထိတော့ပါ အရမ်းကြွတက်လာနေ၏.. သူမ ပြီးတော့မယ် ထင်ပါသည်.. သူမ ဖင်က ကြွတက်လာပြီး သူ့ဆီးခုံမှာ ဦးနေဝင်း၏ လိင်တံနဲ့ အသွှင်းထုတ် ပိုးနီးကပ်ကြမ်းလာ၏.. ဖင်လုံးကြီးများမှာ အတင်းရှုံးပြီး အရမ်းကို မြှောက်တက်လာခဲ့၏..
ဦးနေဝင်း၏ လိင်တံထိပ်မှ ယားကြည့်ကျဉ် ဆိမ့်တက်လာပြီး မျက်လုံးများ မှိတ်ကာ အားးးးး အားးးးး အား ဆိုပြီး အသံထွက်ပေါ်လာချိန်မှာတော့ မချိုရဲ့ ဖင်လုံးကြီးများလည်း ဇတ်ဇတ် နဲ့ ကော့တက်လာပြီး အိပ်ယာခင်းပေါ် ဗုန်းကနဲ့ ကြသွား၏…. ထိုအချိန် မိုးမှာလည်း ဆဲစပြုနေပြီ… တစ်ယောက်မျက်နာ တစ်ယောက်ကြည့်ပြီး ရှက်နေကြ၏….
မချို ကျွန်တော်ပြန်မယ် ထီးခဏငှါးပေးပါ့လား ငှါးပေးမယ်လေ..ညကျရင် ပြန်ပို့ ပေးမှာလား””မချို ခွင့်လွှတ်တယ်ဆို လာပို့ပေးမယ်လေ.. ညတိုင်း ကျမပြောတာ ထီး ကိုပြောတာ မချို မညာပါနဲ့ ခုနက မချို တအား တုန်သွားတာ ကြည့်ပြီး ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် ..တစ်ဘဝလုံး တုန်သွားအောင် ဒီဝါကျွတ်ရင် မချိုကို လက်ထပ်ချင်ယ် သွားပါလူဆိုး ဒီကသနားလို့ ကြွေးလိုက်တာအိုးပါ ပြောင်အောင်လျက်သွားတယ်…ခ်ခ်ခ် ။ ပြီးပါပြီ……
ပွဲ ကြိုက် ခင်